दिउँसो ४ बजेतिर एक महिलाले प्रहरीलाई गरेको त्यो फोन, घर पुग्दा त…! – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/दिउँसो ४ बजेतिर एक महिलाले प्रहरीलाई गरेको त्यो फोन, घर पुग्दा त…!
त्यस दिन दिउँसो ४ बजेतिर प्रहरी कार्यालयमा फोन आयो। प्रहरीलाई एक महिलाले रुँदै भनिन्, ‘ममाथि ज’बरज’स्ती भयो।’ प्रहरी तत्काल उनको घर पुग्यो।
महिलाले आफूलाई ज’बरज’स्तीको प्रयास गरेको आरोप लगाएका पुरुष लाई पक्राउ गर्‍यो। प्रहरीमा ती महिलाको जाहेरी पनि पर्‍यो। प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती कर णी उद्योगको मुद्दा हाल्यो। ती आरोपित पुरुष लाई अदालतले अनुसन्धानका लागि कारागार पनि पठायो।
२०७६ साल असार २४ गते त्यसरी पक्राउ परेर जेल गएका पुरुष भने त्यसै साल कात्तिकमा छुटे। यो साता भने ती महिलालाई पक्रेर प्रहरीले जेल पठाएको छ। भएको के थियो भने अदालतले ती महिलाले पुरुषविरुद्ध झुठा जाहेरी दिएको ठहर्‍याएको थियो। उनको जाहेरीको आधारमा जेल परेका ४९ वर्षे पुरुष अदालतको २०७६ साल कात्तिक ४ गतेको निर्णयपछि छुटेका थिए।
महिला आफ्नै घरतिर थिइन्। गत महिना, असार २८ गते भने प्रहरीले उनलाई पक्रेको हो। कास्की अदालतका न्यायाधीश काजीबहादुर राईको इजालासले ती महिलालाई एक महिना कारागार सजायको फैसला सुनाएको थियो। फैसलापछि महिला फ’रार सूचीमा थिइन्।
प्रहरीले फ’रार सूचीका प्रतिवादी खोज्ने क्रममा पक्रेर उनले भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जेल सजायका लागि जेल पठाएको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सुवा हमाल बताउँछन्। सर्वाेच्च अदालतबाट जारी विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही गोपनियता कायम राख्नेसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०६४ अनुसार ती जाहेरवाला महिलाको वास्तविक नाम अदालतको फैसलामा उल्लेख छैन। परिवर्तित भनेर ‘पोखरा ११२’ नाम दिइएको छ।
सुरुमा ती महिलाले पोखरा ३२ सुकुम्बासी टोलका एक पुरुष आफ्नो डेरामा आई जब’रज’स्ती कर णी प्र’या’स गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। डेरामा निदाइरहेको बेला कोठामा छि’रेका ती पुरुषले हात समाई आफूलाई ज’बरज’स्ती ता’न्न खोज्दा फु’त्किएर भागेको र बुट्टे कुर्थाको बायाँसाइडसमेत च्या’ति’एको बयान महिलाले प्रहरीलाई दिएकी थिइन्।
तर, पछि तिनै महिलाले अदालतमा बकपत्र गर्दा भने आफ्नो लुगा त्यसअघि नै काम गर्दा च्या’ति’ए’को र ती पुरुषले आफूमाथि कुनै ज’बरज’स्ती नगरेको बताएकी थिइन्। आफू आवेशमा आएर आफ्नै श्रीमान्का चिनजानका ती पुरुषलाई झुठा आरोप लगाएको महिलाले अदालती बकपत्रमा स्वीकार गरेको न्यायाधीश राईले गरेको फैसलाको तथ्य खण्डमा उल्लेख छ।